10 Ruux oo Isku Qoys ah oo Ku Dhintay Duqeyn Maraykanku ka geystay magaalada Raqqa ee Suuriya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Magaalada Raqqa ee dalka Suuriya waxaa ka soconaya gumaad naxdin badan oo ay geysanayaan diyaaradaha Taxaalufka uu Maraykanka hogaaminayo iyo malleeshiyaad Kurdiyiin ah oo taageero ka helaya Maraykanka.
Magaalada ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay marti gelineysay dagaallo adag oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana hadda ay u egtahay magaalo gebi ahaanba burburtay, iyadoona dadkii ugu badnaa ay duruufo adag uga barakaceen magaalada iyagoo qabtay magaalooyinka kale ee nabdoon.
Dagaallada caadiga ah ee magaalada ka dhaca waxaa u dheer duqeymo cadowtooyo oo aan loo meel dayin kuwaas oo diyaaradaha Maraykanku si joogta ah uga geystaan magaalada.
Duqeyntii ugu dambeysay waxay ahayd mid aad u naxdin badan, kadib markii la beegsaday guri ku yaala bartamaha magaalada, waxaana halkaas ku geeriyooday 10 Ruux oo isku qoys ah, kuwaas oo xilligaas ku sugnaa guriga.
Tobanka Ruux ee geeriyooday 6 kamid ah waxay ahaayeen Caruur, 2 kalana waxay ahaayeen dumarka halka labada kale ee soo hartay ay ahaayeen rag, waxaana arinta naxdinta badan ay tahay in dhamaan tobankaas Ruux ay isku qoys ahaayeen.
Dowladda Maraykanka oo aysan jirin cid kula xisaabtameysa gumaadka ay ka wada dalalka caalamka Islaamka ayaa u muuqaneysa iney sii kordhineyso gabood fallada ka dhanka ah Muslimiinta tan iyo markii talada dalkaas uu la wareegay Donald Trump.